Qaxootiga eriteriyaanka oo lagu xiro shuruudo aan macquul aheyn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaxootiga eriteriyaanka oo lagu xiro shuruudo aan macquul aheyn. sawir: Themba Hadebe/TT.
Qaxootiga eriteriyaanka oo lagu xiro shuruudo aan macquul aheyn
Yohannes: Kugu xumeeyn maayo laakiin waa mid adiga kuu taala.
La cusbooneeyay torsdag 31 augusti 2017 kl 12.37
La daabacay torsdag 31 augusti 2017 kl 08.44
Wakaaladda socdaalka ayaa lagu eedeeyey iney ku xiraan shuruudo aan suurtagal aheyn qaxootiga ka soo jeeda dalka Eriteriya ee dooneya iney qaraabadood la midoobaan. Sida ay laanta qaxootiga ee hayadda qarammada midoobey UNHCR marar badan ku dhaleeceeysay wakaaladda socdaalka.
Xeerka u deggsan ayaa ah in dadka dooneya iney la midoobaan qaraabadood ey sitaan dal ku gal si ey Sweden ugu soo socdaalaan. Hase yeeshee qaxooti badan ee u dhashay dalka Eriteriya waxay ku sugan yihiin dalka deriska la ah ee Itoobiya oo aanay xiriir dibloomaasiyadeed wada lahayn, sidaa daraadeedna aaney heli karin dal ku gal.
Si haddaba ay shuruuddaa u soo buuxiyaan ayey u aaminaan mukhalisiin dhuumaaleeysi ku geeysa waddammada deriska ee laga helo safaarrado isdhiidhish ah.
Yohannes ayaa sheegay in carruurtiisii iyo xaaskiisiiba la af-duubey kadib kolkii ey talo saarteen mukhalisiin sidii uu ku soo gaarsiin lahaa dalka Suudaan oo ey ka dalban karaan baasaboor eriteriyaan.
–Dhabbada waxaa ku qabsaday mukhalisiin oo gacanta ku hayey muddo toban maalmood ah. Waxaan aad u dareemayay kadeed. Waa dad wax walba laga filan karo, waxey doonaanna sameeya. Gabdhaha ayey kufsadaan, waxey ka sii iibiyaan Liibiya mukhalisiin ku sugan.
Yohannes wuxuu cadaadis siyaasadeed uga soo cararay dalka Eriteriya. Maadaama uu helay xeerka deggenaansho ee qaxootiga ee u ogolaanaya inuu qoyskiisa la midoobo, ilmiha iyo xaaska.
Maadaama aaney haysan dal ku gal, isla-markaana ku sugnaayeen dalka Itoobiya oo aannu ka dhaxeeyn cilaaqaad diblomaasiyadeed si ey uga qaataan baasaboor ey ku xaqiijiyaan cidda ey yihiin waxey u baahdeen in lagu hubiyo tijaabada dheecaanka DNA, hase yeeshee ay wakaaladda socdaalku shuruud uga dhigtay iney marka hore caddeeyaan iney isku dayeen sidii ey baasaboorkii dalkooda ku heli lahaayeen.
Sida uu Yohannes qabo inay ahayd sababta ay xaaskiisu u doonatay mukhaliska. Wakaaladda socdaalka ayaa u sheegtay laanta wararka idaacadda ee Ekot in aan loo baahnayn in lagu shuruudeeyo iney galaan safarro aan sharci aheyn, hase yeeshee war laga soo xigtay howl-wadeenno ka howl-gala safaaradda uu dalka Sweden ku leeyahay magaalada Addis Abeba in aanay suurtagal ahayn in lagu safro si sharci ah iyada oo aan la sidan dal ku gal.
–Wararka aannu ka heyno safaaradda uu dalka Suudaan ku leeyahay Addis Abeba suurtagal maahan. Waxaa loo baahan yahay dal ku gal si looga gudbo xadka, sida uu sheegay Peter Thulin oo ka howl-gala safaaradda Sweden u fadhida Itoobiya.
Sannadka illaa iyo hadda waxaa ka soo dalbaday magaalada Addis Abeba sidii ey qoysaskooda kula midoobi lahaayeen 160 ruux oo banadkood aaney heys-san dal ku gal, sida lagu sheegay war laga soo xigtay safaaradda.
War-bixin safaarradu u dirtay wakaaladda socdaalka horraantii xilligii kuleeylaha ayay ku caddayd in wakaaladda socdaalka ay marar badan ku xidho shuruud keenaysa in sharci-darro lagu safro, isla-markaana ay safaaraddu horay ugu war-gelisay xaaladdaa wakaaladda socdaalka.
Sidoo kale waxay ku caddeeyd inay laanta qaxootiga ee ururka caalamiga ee Qarrammada Midoobey UNHCR xiriirro dhowr ah kala yeesheen safaaradda iyaga oo ku dhaleeceeynaya hayadaha Sweden iney dusha ka saaraan qaraabada midoobeeysa shuruudo aan suurtagal aheyn haddii aan la adeg-san mukhalisiin.
Theresa Karlbjörn oo ka howl-gasha wakaaladda socdaalka.
–Waxaa ii muuqata natiijada in aan cidna laga cod-san karin inay safar noocaasi ah gasho, haddii aan la heeysan baasaboor lagu dhoofo. Hase yeeshee ay safaaradda Sweden ay ku leedahay magaalada Addis Abeba ay sheegtay in falkaa la sameeyey. Siday kuula muuqataa?
–Ilama ahan macquul.
Dhowaantan ayay maxkamadda sare ee socdaalku geli doontaa dacwad muhiimad ku fadhida ee u dhiganta.
Dhallaankii Yohannes iyo xaaskiisu waxey af-duubnaayeen muddo 10 maalmood ah, hase yee la sii daayey kolkii laba jeer laga bixiyey madax-furasho.
Iminka waxey ku sugan yihiin Suudaan, mana uu ogsoona wax la soo gudboonaaday muddadii ey qafaalashada ku jireen. Uma muuqato inay suurtagal tahay iney hayado iswiidhish ihi dusha ka saaraan shuruudo ku kallifaya in la galo safarro halis ah.
–Aad bay halis u tahay waddan kale oo loo safro si sharci darro ah, sida uu sheegay Johanne oo aan ahayn magaciisii dhabta ahaa. Iyada oo ammaanka dartiina cid kale lagu bedeley inay codkiisii akhriso.